अस्ति काठमाडौंको कोठामा भोकभोकै रोएका दाजुभाईको आज यो अवस्था,४ दिनमै गरिवको जिन्दगीमा यस्तो भयो, शिशिर भण्डारी रोए (भिडियो हेर्नुस) – Classic Khabar
यस अप्ठेरो समयमा धेरै जना पिडामा छन् । कति सँक्रमित अक्सिजन र उपचारको अभावमा छन् कतिलाई भोकको पिडा छ । यसैबिच केहि दिन अघि काठमाडौंको नारायणस्थानमा एक हुम्लाका युवा भोकै तिन दिनदेखि बिरामी भएर छटपटिरहेको खबर आयो । शिशिर भण्डारी सहयोग लिएर पुगे । यसैबिच शिशिरले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखे- ‘हुम्लाको २३ बर्षिय नरेन्द्र भाई र उनको भाई काठमाडौं, नारायणस्थानको एक कोठामा ३ दिनदेखि भोकै रहेको र नरेन्द्र बिरामी समेत रहेको भिडियो आईसकेपछि देश तथा बिदेशबाट धेरै महान सहयोगीहरुले सहयोग गर्नुभयो ।
त्यसको लागि आज थेरापी मेसिन किनेर उनको कोठामा लगिएको छ । मेसिन लगेर कोठामै थेरापी गरिरहँदा नरेन्द्रको खुशीको आँशु झर्यो । नरेन्द्रका भाई राम बहादुर पनि ‘अब दाई ठिक हुने भए’ भन्दै दँग भए । नरेन्द्रले आफुलाई सहयोग गर्ने सम्पुर्णलाई धन्यवाद दिए । भिडियो हेर्नुस
Prevकोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण जटिल भएको वा नभएको थाहा पाउने चार सङ्केत, यदि यस्तो संकेत छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानुहोला अन्यथा ज्यानै जान सक्छ !
Nextलोक गायिका शोभा कार्कीले बिगत सम्झेर धुरु धुरु रुदै भनिन:आमाको लासमाथि चढेर मैले दुध खाए
भोलिपल्ट बिहान उनीहरुले नुहाइ धुवाई गरेर पासोलाई पूजा गरे त्यसपछि …….
धुर्मुस सुन्तलीको आशुको नाटक र रंगशाला भात्काउछु भन्ने तारा बराललाई कस्ले दियो यस्तो चेतावनी ? (भिडियो सहित)